डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा मौन प्रदर्शन [तस्बिरहरू]- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा मौन प्रदर्शन [तस्बिरहरू]
आश्विन १७, २०७७ तस्बिर : केशव थापा
काठमाडौँ — स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सुधार माग गर्दै अनशन बसेका सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा युवाहरुले माइतीघर मन्डलामा मौन प्रदर्शन गरेका छन् । जुम्लामा १९ ‌औं चरणको सत्याग्रह सुरु गरेका डा. केसी अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) छन् । सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी समूहले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा अनसनको २० औ दिन पुगीसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखएकोमा प्रदर्शनकारीहरुले खेद जनाएका थिए ।
प्रकाशित : आश्विन १७, २०७७ १३:५५
दिशा उल्टो परेपछि धेरै कुरा उल्टो हुन्छ । अनि सबै दिशाको ख्याल नगरेर चारवटा मात्र दिशा ख्याल गर्दा अझ धेरै कुरा झूटा हुन्छन्, जसलाई सत्य हो भन्ने ठानी हामी भ्रम बोकिहिँड्छौँ ।
आश्विन १७, २०७७ मोहन मैनाली
घरबाहिर निस्कन पाउँदैनस् भनेर सरकारले नभनेको भए डुल्ने रहर त्यति औधी लाग्दैनथ्यो होला । तर, यसपालि कोरोनाको डरले घरभित्र लुक्नुपरेका बेला घरबाहिर निस्कौँ, निस्कौँ लाग्यो । एउटा उपाय निस्कियो– कुर्सीमा बसेर नेपाल घुम्ने । घुम्ने तलतल मेटाउन मलाई मन पर्ने लेखक डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठको पुस्तक पल्टाएँ– नेपाल : नखुलेका पाटाहरू (विचार–विज्ञान लेख संग्रह) ।
मैले सुन्दा सुन्दा गरेको गीतको एउटा गेडाबाट सुरु भएको छ यो किताब । त्यस गीतले भन्छ,
विश्वमा अग्लो हिमाल काखमा हाम्रो नेपाल
हाम्रा राजा ठूला छन्, हाम्रै देश विशाल ।
किताबले भन्छ, नेपालका जडीबुटी खोज्ने जागिर खान थालेका बेला पहाड र हिमाल हिँड्दा डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ यो गीत मनमनै गुनगुनाउँदा रहेछन् । मनन पनि गर्दा रहेछन् किनभने त्यसले दिएका ज्ञानका आधारमा दिशा छुट्याउँदा रहेछन् । अर्थात्, हिमाल हेरेका बेला मुख भएतिर उत्तर, दाहिने हात भएतिर पूर्व, देब्रे हात भएतिर पश्चिम र घुच्चुक भएतिर दक्षिण ।
माथिल्लो डोल्पाको अग्लो भञ्ज्याङ सेसुला पुगेका बेला यो तरिकाले दिशा छुट्याउने बानीले उनलाई अप्ठ्यारोमा पारेछ । उनी पूर्व जान खोज्थे उनका पाइला पश्चिमतिर सर्थे र उत्तर लाग्छु भन्दा दक्षिणतिर ।
चेत नगुमाएका बेला पनि उनलाई यस्तो किन भयो भने उनी नेपालको त्यस भागमा पुगेका थिए, जहाँबाट हिमाल दक्षिण पर्थ्यो, नेपालका अधिकांश भूभागबाट झैं उत्तर पर्दैनथ्यो । उनी हिमालपारि पुगेका थिए, जहाँबाट हिमाल हेरेका बेला मुख भएतिर दक्षिण र दाहिने हात भएतिर पश्चिम पथ्र्याे । त्यहाँका मानिसले माथिको गीतलाई यसरी सच्याउनुुपथ्र्याे : विश्वमा अग्लो हिमाल ढाडमा हाम्रो नेपाल ।
यसरी डा. श्रेष्ठले नेपालमा स्थापित गलत मान्यताबारे सटीक टिप्पणी गरेका छन् । यसपालि उनको यो लेख पढ्दा मलाई लाग्यो— राजनीति, समाज, अर्थतन्त्रलगायतका नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा यस्ता कति र कस्ता गलत मान्यतालाई हामीले अहिले पनि सही मानेका हौंला ? त्यसो गर्दा हामीले हिँड्ने बाटो कति भ्रमित भएको होला ?
गीतको पहिलो लाइन असत्य ठहरियो । दोस्रो लाइनको पहिलो अंश पनि अब उप्रान्त सही ठहरिएन । बाँकी रह्यो— हाम्रै देश विशाल । सो किताबको दोस्रो लेखमा डा. श्रेष्ठले नेपालको विशालता अर्थात् यसको क्षेत्रफलबारे हामीले बोकिहिँडेको भ्रमबारे बताएका छन् ।
पश्चिम नेपालमा चुच्चो पलाउनुअघिको नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर भनिन्थ्यो, अहिले १,४७,५१६ वर्ग किलोमिटर भनिन्छ । डा. श्रेष्ठका विचारमा यो ‘नेपालको पीँध कत्रो छ वा यसको जग कति छ अथवा भूतलमा यसको क्षेत्रफल कति छ ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरको हो । नेपालको क्षेत्रफल कति छ भन्ने प्रश्नको उत्तर होइन । डा. श्रेष्ठले यो कुरा बुझाउन घर भएको जमिन र घरको क्षेत्रफल बीचको अन्तरको उदाहरण दिएका छन् । घर कत्रो छ भनेर कसैले सोध्दा कसैले ६ आना (घरको जगको क्षेत्रफल) भन्छ भने उसले घरको होइन जगको मात्र आकार र आकृतिबारे बताएको हुन्छ । त्यही ६ आना जग्गामा एकतले, दुईतले वा तीनतले घर बनेको हुन सक्छ ।
यसलाई स्पष्ट पार्न उनले भनेका छन्, ‘दुई पैतालामा उभिएको मान्छे मरेपछि ...उसको चिता बनाउनुपरेमा दुई पैताला होइन दुई गज जमिन चाहिन्छ... एउटा जिउँदो मान्छेको पूर्ण आयाम पैतालाको नापो मात्र होइन, त्यस निम्ति उसको कदको पनि बोध हुन आवश्यक छ ।’
नेपालको क्षेत्रफल जुन मान्यताका आधारमा निकालिएको छ, त्यस मान्यताका आधारमा कोरोना क्वारेन्टिन घर बनाउँदा एक जना मान्छेका लागि उसको पैतालाको लम्बाइ र चौडाइ बराबरको बेड बनाउनुपर्छ । त्यस्तो क्वारेन्टिन बेड कति उपयुक्त हुँदो हो ?
डा. श्रेष्ठका विचारमा नेपालको प्रतिवर्गकिलोमिटर जनघनत्व र पहाडी भेगको वनको क्षेत्रफलजस्ता आँकडा तथ्यांक होइन ‘झुक्यांक’ हुन् । तिनका आधारमा कुनै काम गर्नु पैताला मात्र अट्ने क्वारेन्टिन बेड बनाउनुजस्तै हो ।
देशको क्षेत्रफल निकाल्ने यो तरिका ती समथर देशका लागि मात्र उपयुक्त छ, जसको उचाइ हुँदैन, चौडाइ र लम्बाइ मात्र हुन्छ । मधेसबाट उत्तर लागेपछि नेपालको क्षेत्रफल नाप्न यसको उचाइ ननापी हुँदैन । यहाँनेर हामीले भन्ने गरेका दस दिशामध्येको ऊध्र्व दिशा अर्थात् अकाशतिरको दिशा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
‘यो तथ्यांक यकिन नभएसम्म नेपाल कत्रो छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ‘नेपाल विशाल छ, विशालभन्दा टड्कारो केही पनि छैन’ भन्ने उत्तर नै हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइयोस् र क्विज मास्टरले त्यसैलाई पूर्णांक दिऊन् । नत्रभने नेपाल कत्रो छ भनेर कसैले कसैलाई नसोधून्,’ डा. श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन् ।
कहिलेकाहीँ फुर्सदले, कहिलेकाहीँ बाध्यताले, कहिलेकाहीँ रहरले दोहोर्‍याईतेहेर्‍याई पढ्ने पुस्तकमध्येमा पर्छ यो । जतिपल्ट पढ्यो त्यतिपल्ट नयाँ स्वाद पाइन्छ, जतिपटक पढ्यो त्यतिपटक नेपालका नखुलेका पाटा खुल्छन् । यसपालि यही किताबका पेजमा कालीगण्डकी नदीको तीरमा बसेको कागबेनी गाउँ पुगेँ । आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला दुुईवटा हिमाल बीचबाट ती टाकुराभन्दा पाँच हजार मिटर गहिरो ठाउँबाट आफ्नो बाटो खनेर ओरालो लागेको कालीगण्डकीको किनारमा पाइने शालिग्रामसित भेट गराइदिए डा. श्रेष्ठले । अनि दिमागमा प्रश्न हालिदिए, ‘कुन समुद्रको कति गहिराइमा जीवात्माका अवशेषहरू कसरी पत्थररूपी शालिग्राममा परिणत भए ? समुद्रको पीँधबाट यिनीहरू कसरी आकाश छुने भूभाग चुमेर कालीगण्डकीको धारसँग सलबलाउन आइपुगे र त्यहाँबाट बगेर किन समुद्रैतिर लाग्दै छन् ?’
यस किताबमा भएका सुरुका दुईवटा लेखमा भएका केही कुराको चर्चा गर्न मात्र यति बेर लाग्यो भने यस किताबमा भएका पचासैवटा लेखका थोरै कुराको मात्र चर्चा गर्दा पनि धेरै दिन लाग्छ । तिनको अर्थ लगाउन झन् धेरै दिन लाग्छ । नेपालको भू–प्राकृतिक संरचना विषयका लेख पढ्दा म बसेको धर्ती, त्यसका विशेषता, त्यसमा मैले गर्न हुने र नहुने कामको बोध हुन्छ । विज्ञान, प्रविधि र परम्परा तथा जैविक सम्पदाका अथाह भण्डारबारे थाहा पाउँदा प्रकृति र पुर्खाले आफूलाई कस्ता अमूल्य सम्पत्ति र ज्ञान दिएका रहेछन् भन्ने लाग्छ । ती सम्पत्ति र ज्ञान ‘बाँदरका हातमा नरिवल’ भएको देख्दा आफैं र आफ्नो समयलाई धिक्कार्न मन लाग्छ । यी सम्पत्ति र ज्ञानको उपयोग गर्न थोरै मिहिनेत गर्न, त्यसो गरेर आफ्नो जीवन सरल र समृद्ध बनाउन हामीलाई केले रोकेको होला भन्ने विचारले रन्थन्याउँछ ।
विज्ञान पढेका, विज्ञान विषयमा जिन्दगी बिताएका लेखकले प्रकृति र विज्ञानका जटिलताबारे यति सरल र सरस ढंगले बताउन सकेको देख्दा अनौठो लाग्छ । हरेक लेखको सुरुमा कविताका प्रासंगिक गेडा राखिएका छन् । त्यो देख्दा लेखक कविताका गम्भीर अध्येता रहेछन् भन्ने लाग्छ ।
त्यहाँभन्दा तल रहेका जानकारी देख्दा लाग्छ— लेखकमा नेपालका प्रविधि, परम्परा र जैविक विविधताको अथाह भण्डारसम्बन्धी ज्ञानको अथाहै भण्डार छ । गलत परम्परा, गलत तरिकाबारे उनले गरेका प्रश्न देख्दा लाग्छ— यी लेखक सच्चा विद्रोही हुन् । अनि सोच्दा लाग्छ- विज्ञानको ज्ञान भएको, साहित्यमा चुर्लुम्म डुबेको र दिमागमा प्रश्न बोकेको मान्छे लेखक भएपछि यस्तो किताब जन्मँदो रहेछ जसले नेपालका नखुलेका पाटा खुलाउँछ, नसोधिएका प्रश्न सोध्छ र पाठकको मनको अन्धकार हटाउँछ ।
प्रकाशित : आश्विन १७, २०७७ १३:०७
नागरिक अभियन्ताले भत्काए कमलपोखरीको बीचमा बनाइएको कंक्रिट [तस्बिरहरू]